Okungcono Kangakanani Okuthunyelwe Kubhulogi Kukwenza Uthande Ngcono | Martech Zone
Kulungile, leso sihloko singadukisa kancane. Kepha ikunakile yakwenza ukuthi uchofoze ubhale okuthunyelwe, akunjalo? Lokho kubizwa ngokuthi yi-linkbait. Asizanga nesihloko esishisayo sebhulogi esinjengaleso ngaphandle kosizo… sisebenzise Okuqukethwe kwePortent's Idea Generator.
Abantu abahlakaniphile ku- I-Portent kuvezile kanjani umbono we-generator waba khona. Ithuluzi elihle eligxila kulo amasu wokuxhumanisa lokho kuzanywa futhi kuyiqiniso:
I-Ego hook - abantu babelana ngokuqukethwe uma ubamemeza.
I-hook yokuhlasela - ngokuqhubeka nokuhlasela, ungavusa inzalo.
Isisetshenziswa hook - insiza enhle ihlale ingumqondo omuhle wokuqukethwe!
Izindaba hook - Izihloko ezihamba phambili zishayela ukuchofoza okuningi.
Ihhuku elihlukile - dala impikiswano futhi uzitholele i-hook ehlukile.
Ihlaya hook - Ufunda lokhu okuthunyelwe, akunjalo?
Izihloko zibaluleke kakhulu kokuqukethwe kwakho. Engikuthanda kakhulu ngaleli thuluzi kakhulu ukuthi akugcini ngokuvela isihloko, futhi kuchaza nokuthi kungani isihloko sisebenza njenge-linkbait. Akuphelele ngaso sonke isikhathi, kepha kuyajabulisa futhi kuza nemibono yokuqukethwe enhle ngokwanele ukubhala lokhu okuthunyelwe ngakho!
Zama i-Portent's Free Idea Generator
Tags: i-generator yombono wokuqukethwei-generator yombonolinkbaitamasu wokuxhumanisaathwale